TOSIK’ART: Fifaninanana mamorona orinasa amin’ny sehatry ny kolontsaina | déliremadagascar
TOSIK’ART: Fifaninanana mamorona orinasa amin’ny sehatry ny kolontsaina
Socio-eco	 3 août 2019 lynda
Asa mahavelona ny fandraharahana ara-kolontsaina. Mbola sakana tsy mampiroborobo ny indostria ara-koltoraly eto amintsika anefa ny lafiny ara-bola, ny ara-teknika, ny tsy fahampian’ny traikefa, ny tsy fahampian’ny foto-drafitr’asa sy ny maro hafa. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina (MSK) ho fanosehana ireo mivelona amin’ny kanto ho lasa matihanina. Amin’ny alalan’ny tetikasa “Tosik’Art” no hanampiana ireo manana tetikasa amin’ny sehatry ny kolontsaina. Miendrika fifaninanana izy ity ka hahazo fampiofanana miaraka amin’ireo matihanina momba ny fandraharahana ara-kolontsaina sy fananganana orinasa ny tompona tetikasa 20 voalohany voasafidy. Aorian’izay dia mbola hiatrika fifantenana izy ireo ka hahazo famatsiam-bola ny tetikasa dimy mendrika indrindra. Mitentina 20 tapitrisa Ariary ny loka ho an’ny voalohany, 15 tapitrisa Ariary ho an’ny faharoa, 10 tapitrisa Ariary ho an’ny fahatelo, 5 tapitrisa Ariary ny fahaefatra ary 2.500.000 Ariary ny fahadimy. Mbola ho arahi-maso ireo mpandresy amin’ny fifaninanana mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fanatanterahan’izy ireo ny tetikasa, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny OFNAC (Ofisy Nasionaly misahana ny kanto sy ny kolontsaina), Rakotondrabe Niry nandritra ny lanonana fampahafantarana ny tetikasa “Tosik’Art”, ny 2 aogositra 2019 teny Soarano.
Hisokatra amin’ny alatsinainy 5 aogositra 2019 ny fisoratana anarana ary tsy hifarana izany raha tsy ny 15 septambra 2019. Olona iray na vondron’olona mizaka ny zom-pirenena malagasy, 21 ka hatramin’ny 45 taona, manana tetikasa iray amin’ny sehatry ny kanto toy ny dihy, ny teatra, ny sary, ny feo, ny zaitra, ny jeu vidéo… no afaka mandray anjara. Azo raisina eny amin’ny ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina na ny tranom-bokim-pirenena Anosy na sintonina ao amin’ny tranokalan’ny ministera ny taratasy fisoratana anarana. Averina miaraka amin’ny horonan-tsary dimy minitra mirakitra ny mombamomba ny tetikasa, ny kopia kara-panondro sy ny fanamarinam-ponenana izany rehefa feno. Ho an’ireo any amin’ny faritra na avy eto Antananarivo dia afaka alefa amin’ny alalan’ny mailaka tosik’art.msk@gmail.com ny dosie. Nohamafisin’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Andriatongarivo Lalatiana fa ho fampiroboroboana ny indostria ara-kolontsaina sy hanosehana ireo mpiangaly kanto ity tetikasa “Tosik’Art” ity.
ministeran'ny serasera sy ny kolontsainatosik'art
TAGNAMARO TENY AMIN’NY EPP AMBOHIPO: Mamantana sekoly vaovao ireo mpianatra
FAMPIRANTIANA NY TANTARA ARA-TOEKARENA: Hahaizana mitsinjo ny ho avy
One comment on “TOSIK’ART: Fifaninanana mamorona orinasa amin’ny sehatry ny kolontsaina”
Pingback: TOSIK’ART: Fifaninanana mamorona orinasa amin’ny sehatry ny kolontsaina - ewa.mg